Imirikiti ndị mmadụ nwere ike ịma ihe gbasara akwa anya, mana ha amachaghị banyere ha. Igwe eji eme ka anya dị ka ụdị nchekwa nchekwa, ụdị dị iche iche, enwere ike iji ya rụọ ọrụ n'ọtụtụ ebe, ndị na-emepụta ihe nhicha anya anya mmiri na-akọwa n'ụzọ zuru ezu ọrụ nke ngwa anya ngwa ngwa.
Na petrochemical osisi, ụlọ ọgwụ laboratories, ụlọ akwụkwọ laboratories, shipyards na na, niile enweghị ike iche na mberede itucha anya asacha ngwaọrụ, anya asacha ngwaọrụ ke China enweghị doro anya ọkọlọtọ, ukwuu n'ime iji American ma ọ bụ European ọkọlọtọ. Ngwaọrụ na-ehicha anya ngwa ngwa nwere ike belata ihe ndị na-emerụ ahụ na mmerụ ahụ. Ọ bụrụ na a na-agba ọgwụ ma ọ bụ ihe ndị na-emerụ ahụ n’ahụ ma ọ bụ n’anya onye ahụ, a pụrụ iji ihe na-asacha anya mee ihe ngwa ngwa, nke nwere ike igbochi mmerụ ahụ ọzọ na ahụ mmadụ. Mgbe flushing, ị kwesịrị ị na-achọ ndụmọdụ ahụike ozugbo ma soro nduzi nke dọkịta. Naanị ya na ezi nchekwa, agaghị eme mmebi na-enweghị ike ịgbanwe agbanwe.
Bohua anya asacha emeputa ọkachamara na mmepụta nke anya asacha ngwaọrụ ihe karịrị afọ iri, na-aga n'ihu nnyocha na mmepe ọhụrụ, na mmepụta nke mejupụtara anya asacha ngwaọrụ, electric okpomọkụ anya asacha ngwaọrụ, vetikal anya asacha ngwaọrụ, desktọọpụ anya asacha ngwaọrụ na ọtụtụ ndị ọzọ anya asacha ngwaọrụ, ọkachamara injinịa na-emepụta, nwere ike ahaziri dị ka saịtị na gburugburu ebe obibi.